ခါချဉ် ကိုက်ခံရတဲ့အခါ သက်သာစေဖို့ - Hello Sayarwon
ခါချဉ် ကိုက်ခံရတဲ့အခါ သက်သာစေဖို့
ခါချဉ် လို့ ကြားလိုက်ရင်ကို အသားတွေမှာ ကြက်သီးထသလို ခံစားမိလား……… ခါချဉ်တွေက ကိုက်ရင် တော်တော်လေး နာသလို အရေပြားမှာ အဖုအပိမ့် ထွက်တဲ့အထိ ဖြစ်တာပါ။ ယားသလို နာသလို နဲ့ လက်က ကုတ်ရင်း အရည်တွေ ထွက်တဲ့အထိတောင် မသက်သာတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ခါချဉ်ကိုက်တဲ့အခါ ကိုက်ခံရတဲ့ဒဏ်၊ ကုတ်ဖဲ့မှုဒဏ် တွေကြောင့် အရေပြားကို ထိခိုက်တာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ခါချဉ်ကောင် ကိုက်ခံရရင် ဘယ်လို သက်သာအောင် လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို ဝေမျှပေးမယ်နော်။
တဆစ်ဆစ်နာမယ် စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
လည်ချောင်း အတွင်းနံရံတွေ ရောင်မယ် စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ခါချဉ်ကောင်ရဲ့ အဆိပ်ကြောင့် အခုလို ဖြစ်ရတာပါ။
ခါချဉ်ကိုက်ခံရတာက ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အထိ တဆစ်ဆစ်နာတာ၊ ယားယံတာ၊ အဖုအပိမ့် ဖြစ်တာမျိုးတွေ ရှိနိုင်ပေမယ့် ဆေးခန်း ပြရလောက်တဲ့အထိတော့ မပြင်းထန်ပါဘူး။ ခါချဉ်ကောင် ကိုက်ခံရတဲ့အခါ
ရေခဲဝတ်ကပ်ပါ – ခါချဉ်ကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို ရေခဲဝတ်နဲ့ မိနစ် ၂၀ လောက်ကပ်ထားပေးပါ။ ဒီလို ကပ်ထားပေးတာက ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
Hydrocortisone cream လိမ်းပါ – ခါချဉ်ကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို သေချာ သန့်စင်ပြီးပြီးဆိုရင် Hydrocortisone cream လိမ်းပေးပါ။ အရေပြား ယားယံတကို သက်သာစေပါလိမ့်မယ်။
မကုတ်ပါနဲ့ – ခါချဉ်ကိုက်ခံရတဲ့ နေရာက ယားယံနေနိုင်ပေမယ့် မကုတ်ပါနဲ့။ ကုတ်တာ​ကြောင့် အရေပြား ပေါက်ပြဲပြီး မလိုအပ်ဘဲ ပိုးဝင်နိုင်တာကြောင့်ပါ။
အဆီ တစ်ခုခုလိမ်းပေးပါ – အုန်းဆီ၊ လာဗင်ဒါဆီ၊ စပျစ်စေ့အဆီ ကစလို့ နောက်ဆုံး မီးဖိုချောင်မှာ သုံးတဲ့ ဟင်းရွက်ဆီ ဖြစ်ဖြစ် အဆီ တစ်ခုခုကို ခါချဉ်ကိုက်ခံရတဲ့ နေရာမှာ လိမ်းပေးလိုက်ပါ။ ဒါက ခါချဉ်ကိုက်ခံရတာ​ကြောင့် အရေပြား ယားယံတာ တဆစ်ဆစ်နာကျင်တာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ရှာလကာရည် စိမ်ပေးပါ – ခါချဉ် အကိုက်ခံရတဲ့အခါ ရေထဲကို ရှာလကာရည်ထည့်ပြီး အဆိုပါ ရေထဲကို ခါချဉ်ကိုက်ခံရတဲ့ နေရာကို စိမ်ထားပေးပါ။ ဒီလို လုပ်ပေးတာက အရေပြား ယားယံတာ နဲ့ တဆစ်ဆစ် နာကျင်တာကို သက်သာစေနိုင် ပါတယ်။ အဆိပ်လည်း ပြေစေနိုင်ပါတယ်။
ရှားစောင်းလက်ပပ် ကပ်ပါ – ခါချဉ် ကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို ရှာစောင်းလက်ပပ် ဂျယ်လီသားနဲ့ ပွတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီလို ပွတ်ပေးတာက အသားယားတာနဲ့ တဆစ်ဆစ် နာကျင်တာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
Baking soda နဲ့ ရေ လိမ်းပါ – ရေနဲ့ baking soda ကို ခပ်ပျစ်ပျစ်လေး ဖျော်ပြီး ရလာတဲ့ အနှစ်ကို ခါချဉ် ကိုက်ခံရတဲ့ နေရာမှာ အုံထားပါ။ ခြောက်သွားရင် ရေအေးအေးလေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ အသားယားတာ နဲ့ တဆစ်ဆစ် နာကျင်တာကို သက်သာစေ နိုင်ပါတယ်။
What are fire ant bites? https://www.medicalnewstoday.com/articles/312484 Accessed Date3May 2020
How To Treat Ant Bites Naturally (& Get Rid of Ant Beds!) https://amotherfarfromhome.com/ant-beds-ant-bites-naturally/ Accessed Date3May 2020